Maxaa Sababo Ilmaha Qaar Inay ku Adkaato Waxbarashada? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Dr. Cabdiraxmaan Max'ed Cabdiraxmaan, May 24, 2019
Miski Cabdinuur Salal — June 26, 2019
Waxbarashada oo ku adkaanto ilmaha ama liidashada fahankooda waxbarsho, badanaa waa waxa ugu badan oo ay ku wareeraan waalidka iyo macalinka ayaga oo mararka qaar ay u maleeyaan cunugga in uu yahay mid ay liidato guud ahaan shaqada maskaxdiisa .inkastoo aysanjirin sababo toos ah oo cadeeynaayo in ay keento adkaanshaha waxbarashada cunugga, balse waxaa jiro wax-yaalo ka qeeyb qaato hoos u dhaca fahanka waxbarasho ee cunugga, Arin taasna waxa ay katimid dhibaatooyin ku dhacay canugga yaraantiisa.
Haddaba kaallay Aan isla Argnee Wax Yaalaha Ka Qeeyb Qaato Liidashada Fahanka Waxbarashada Cunugga:
Wax-yaalaha ka qeeyb qaato liidashada fahanka waxbarsho ee cunugga waxa aan u kala qaadi doonaa 3 marxaladood oo kala ah : Marxladda uurka uu ku jira cunugga , Marxladda uu cunugga dhalanaayo wax-yeelo soo gaartay iyo Marxladda uu la kulmay marka uu dhashay ka dib.
1- Marxalada uurka uu ku Jiro Wax-yaalaha Hoos Udhaca Ukeeno Fahanka Waxbarshda Cunugga Waxaa Kamid ah:
-Hooyada oo cabto sigaar ama qamri xilliga uurka waxa ay ka qeeb qadata hoos u dhaca fahanka waxbarsho ee cunugga ku jira ilma galeenka hooyada.
– Hooyada oo infekshanka laga daaween waayo xilliga uurka ,waxa ay ka qeeb qadata hoos u dhaca fahanka waxbarsho ee cunugga.
-Nafaqo darada ku dhacado Hooyada xilliga Uurka waxa ay ka qeeb qadataa hoos u dhaca ku imaada cunugga fahankiisa waxbarashado.
2- Marxlada uu cunuga dhalnaayo wax-yaalaha ka qeeyb qaato hoos u dhaca fahankiisa waxbarsho waxaa kamid ah:
Cunugga dhasha waqtigiisa ka hor sida in uu cunugga ku dhasha 37 isbuuc ka yar , waxa ay ka qeeyb qaataa hoos u dhaca fahanka waxbarasho ee cunugga ayadoo ay sabab u tahaya kornishaha maskaxda cunugga oo aanan dhameeystirneeyn, wallow ay muuqaal ahaan uu u egyahay cunugga mid dhameeystiran.
Cunugga oo marka u dhashay naqaska ku dhago,wax ay wax-yeelaysaa shaqada maskaxda cunugga ,waxa ay ka qeeyb qaadataa hoos u dhaca fahanka waxbarsho ee cunugga .
Hooyad oo ku daahdo foosha xilliga dhalmada waxa ay saameeysaa maskaxda cunuga, waxa ayna ka qeeyb qaadataa hoos u dhaca fahanka waxbarashada cunugga .
3- Marxalada Dhalashada Canugga Kadib:
Wax-yaalaha Saameyaa Shaqada Maskaxda Cunnugga kana qeeyb qaato hoos udhaca fahanka waxbarshada ee ku imaado cunugga marka uu dhasho kadib waxaa kamid ah :
– Nafaqo daro ku dhacda cunugga inta uu yaryahay waxa ay ka qeeyb qaadataa hoos u dhaca fahanka waxbarashada cunugga, waana sababta ilmaha marka ay yaryihiin hooyada lagula taliyo in ay siiso cunugga naas nujin baraxla.
– Cudur walbo ee ku dhaca cunugga inta uu yaryahya haddii anan laga Daaweeyn waxa ay saameeysaa shaqada maskaxda cunugga taasoo keeni karta hoos u dhaca fahanka waxbarashada cunugga.
– Burada ku sameeysmato maskaxda cunugga waxa ay qalqal galisaa shaqada maskaxda cunnuga waxa ay keentaa liidashada fahanka waxbarsho ee cunugga.
– Jugta uga dhacdo madaxa cunugga waxa ay keentaa hoos u dhaca shaqada maskaxda, waxa ayna ka qeeyb qaadataa hoos u dhaca fahanka waxbarasho ee cunugga.
Gunaanad, Waxa aan Hooyooyinka ugu baaqaayaa xilliga uurka haddii ay isku aragto infekshan sida : kaadi gub,dhabar xanuun, mindhicaro xanuun iyo qoyaan badan. waa muhiin ah in ay hooyada ku xirnanto mar walbo goob caafimaad. Hooya walbo waxa aan kula talinayaa in ay cunuggeeda siiso naas nuujin baraxla. Sidoo kale in ay qaadato cuno dheelitran si aysan ugu dhicin nafaqo daro. Hooya walbo waxa aan kula talinaayaa in ay cunuggeeda jugta ka ilaaliso jugta gaar ahaan madax.
Tags: Maxaa Sababo Ilmaha Qaar Inay ku Adkaato Waxbarashada?.
Next post Maxaan u Yeelan La’nahay Wax Soo Saar?
Previous post Waa Maxay Furuqa Adhigu ( Sheep And Goat Pox)?